Suuqgeynta Emailka: Falanqaynta Haynta Liiska Macaamiisha Fudud | Martech Zone
Macmiil haynta wuxuu xidid ku leeyahay warshadaha wargeysyada. Dhawr sano ka hor, waxaan u shaqeeyay shirkad Suuqgeynta Suuq geynta ku takhasustay Falanqaynta Ka Qayb Qaadashada Wargeysyada. Mid ka mid ah cabbiraadaha muhiimka ah ee loogu talagalay kala-soocidda iyo suuq-geynta rajada laga qabo rukumashada waxay ahayd awooddooda 'haynta'. Ma ahayn (markasta) in aan suuq u suuq galno rajooyin aan si fiican u hayn doonin sidaa darteed, markii aan rabnay in aan helno rajo tayo leh, waxaan u suuq geyn doonnaa xaafadaha iyo qoysaska aan ognahay in ay si fiican u xajiyeen. Si kale haddii loo dhigo, ma aysan qaban 13-kii usbuuc ee gaarka ahaa ka dibna damiintay, dhab ahaantii way cusbooneysiin lahaayeen oo wey ku dhegi lahaayeen.
Si loo falanqeeyo sida wanaagsan ee ay alaabtu u shaqeynaysay iyo sida ay u wanaagsan tahay suuqgeynteennu, waxaan si joogto ah u falanqeyn doonnaa sii-haynta macaamiisheena. Tani waxay naga caawin doontaa inaan ku sii jirno himilada. Sidoo kale, waxay sidoo kale naga caawin laheyd inaan qiyaasno inta macaamiil ah ee ka tagi doonta kahortaga iyo joogitaanka si aan jadwal ugu sameyno ololeheena soo iibsiga si waafaqsan. Bilaha xagaaga ee ay dadweynuhu aadi lahaayeen fasaxa, waxaan u suuq geyn karnaa rajada haynta yar si aan u sii wadno tirinta (macaamiisha xisaabaya = xayaysiinta doolarka warshadaha wargeysyada).
Maxay Tahay Inaad Falanqeyso Haynta Liiska?
Waxaan si daacad ah ula yaabay taas, iyadoo la tixgelinayo qiimaha cinwaanka iimaylka, suuqleyda emaylka ma aysan qaadan Falanqaynta Haynta. Falanqaynta haynta macaamiisha emailka ayaa qiimo u leh sababo dhowr ah:
Lahaanshaha hooseeya wuxuu yimaadaa warbixinta qashinka / spam sare. Lasocodka haynta liiskaaga waxay kaa caawin doontaa inaad dhisato sumcaddaada iyo inaad ka fogaato arrimaha gudbinta ee Bixiyeyaasha Adeegga Internetka.
Dejinta yoolalka haynta waa hab weyn oo lagu hubiyo in waxyaabaha aad ka kooban tahay ay ku jiraan buuriga. Asal ahaan waxay kuu sheegi doontaa inta jeer ee aad qatar gelin karto waxyaabaha liita ka hor inta uusan macmiilku go'aansan dammaanad.
Falanqaynta haynta ayaa kuu sheegi doonta sida liistada liistadaadu u liidato iyo inta macmiil ee ay tahay inaad sii wado ku darista si aad u ilaaliso tirinta liiskaaga iyo; taas awgeed, yoolalkaaga dakhliga.
Sida loo Cabiro Haysashada iyo Quursiga Liiska Macaamiisha Emailkaaga
Tusaalaha aan halkaan ku keenay gabi ahaanba waa la sameeyay, laakiin waad arki kartaa sida ay u caawin karto. Xaaladdan oo kale, (eeg jaantuska) waxaa jira hoos u dhac 4 usbuuc ah iyo mid kale 10 toddobaad. Haddii tani ay ahayd tusaale dhab ah, waxaa laga yaabaa inaan rabo inaan xoogaa nuxur firfircoon ah geliyo astaamaha 4-ta toddobaad ee runti ku daraya waxoogaa zip ah ololaha! Isku mid ah usbuuca 10!
Si aad u bilawdo, xaashiyaha aan adeegsanayo waxay asal ahaan ka qaadanayaan macmiil kasta oo ay xisaabiyaan taariikhda ay bilaabeen iyo taariikhda ay ka bixi doonaan (haddii ay ka baxeen. Hubso inaad hubiso xisaabinta - waxay qabtaan shaqo fiican oo ah inay ku qariyaan macluumaadka meesha ay tahay inay maran tahay oo lagu xisaabtamayo shuruudo oo keliya.
Waxaad arki doontaa shabakadda soo baxday oo haysa wadarta maalmaha ay ku qornaayeen haddii ay ka baxeen. Kani waa macluumaadka aan uga faa'iideysan doono qeybta labaad ee falanqaynta si aan u xisaabiyo heerka haynta usbuuc kasta.
Qalooca haynta ayaa heer sare u ah wershad kasta oo cabbiraysa diiwaangelinta, laakiin sidoo kale waa loo isticmaali karaa in lagu falanqeeyo haynta warshadaha kale - gaarsiinta cuntada (imisa geyn iyo inta jeer ee uu qof u tago wanaagga 'laga yaabee' mahadnaq 'khaas ah ka hor taas) dhibicdu waa hagaagsan tahay), timo jarista, kirooyinka filimada… waad magacawday waadna xisaabin kartaa xayiraadda iyo haynta macmiilkaaga.
Haysashada macaamiisha ayaa sida caadiga ah aad uga jaban qaadashada kuwa cusub. Waxaad u adeegsan kartaa Falanqaynta Haynta si aad u xisaabiso oo aad ula socoto gooladaha hayntaada.
Tusaalahayga been abuurka ah, waxaad ku arki doontaa taas si fudud si loo ilaaliyo tirinta liiskeyga, waa inaan ku daraa 30 +% kale oo ah macaamiisha bilooyin gudahood. Xilligan ma jiro halbeegyo Suuqgeyn Email ah oo loogu talagalay Falanqaynta Haynta - sidaa darteed waxay kuxirantahay warshadahaaga iyo ololeyaashaada, liiskaaga xafidistaada iyo xajintaada ayaa si aad ah u kala duwanaan kara.
Soodejiso Xaashida Ceymiska Excel
Soodejiso Tusaalaha Xawaaladda 'Excel'
Kani waa muunad tijaabo ah oo aan ku soo ururiyey qoraalkan. Si kastaba ha noqotee, waxay haysaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad u awood ugu yeelato inaad falanqeyso hayntaada. Si fudud u-riix shaxda hoose oo samee 'Badbaadinta' si aad u soo dejiso xaashida aan ku dhisay gudaha.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad aad ku fuliso noocan falanqaynta liistadaada ii soo sheeg! Xaqiiqdii waxay ku timaaddaa mid waxtar leh marka aad leedahay reer, tiro dad, habdhaqan, nuxur, iyo macluumaad kharash sidoo kale. Taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameyso qaybo aan caadi aheyn si aad si fiican ugu bartilmaameedsato suuqgeyntaada iyo waxyaabaha ku saabsan dhageystayaashaada.
Tags: Foomka emaylkaliiska liiska emailkaemaylka metrikhaynta emaylkasarehaynta liiskaliiska wareejintahayntahaynta macaamiisha